Halxiraalaha Xannaanada Xoolaha – Taxanaha Maxaabbiistii 77 - Qaybta Shanaad - Caasimada Online
Home Warar Halxiraalaha Xannaanada Xoolaha – Taxanaha Maxaabbiistii 77 – Qaybta Shanaad
Halxiraalaha Xannaanada Xoolaha – Taxanaha Maxaabbiistii 77 – Qaybta Shanaad
Muqdisho (Caasimada Online)-Markii farta la iga saaray liiska maxaabbiista, warbixin kooban ayaa la iga siiyay dadka qaar nawaaxiga Muqdisho ay heliddoodu adkaatay.
Waa nin uu walaalkiis oo maxbuus Ethiopia ku xirani uu waraaq u soo diray laakiin si lagu wargeliyo la la’ yahay.
Guriga ayaan tagey oo gabar guriga joogtay ayaan weydiiyay. Markii hore su’aalo yar ayay i weydiisay, sida kummaad ahayd? iyo maxaad ka rabtaa?